Ampiasao ny endrika Tangrama Free Tangram amin'ny PDF
Inona avy ireo Tangram?
Tangram ao amin'ny PDF (Tangram Worksheet manaraka)
Ampiasao ny lamin'ny tangrama PDF mba hanapahana tangrama amin'ny taratasy mafonja toy ny tahirim-bola.
Large Tangram Pattern
Tangrama kely kely
Asehoy ny asan'ny Tangram ao amin'ny PDF
Tangrams Fun: Ataovy ireo endrika
Ampiasao ny lamin'ny tangrama ao amin'ny PDF hameno ireto fanontaniana manaraka ireto.
1. Karakarao ny tapany tangrama amin'ny fampiasana ny fanondroanao na fitsipika manokana.
2. Asio tahirin-tangrama roa na maromaro mba hanamboarana ny hafa.
3. Asio tapa-tarana roa na maromaro mba hamoronana endriny izay mifangaro.
4. Ampiasao daholo ireo tangrama rehetra mba hanaovana kianja. TSY mijery ny endrika efa misy.
5. Ampiasao ny singa tangramina fito mba hamorona paragrapograma.
6. Manaova traikefa miaraka amin'ireo tapany tangrama fito.
7. Ampiasao ireo tangrama roa mba hanaovana triatra.
8. Ampiasao ireo tangramena telo mba hanaovana triatra.
9. Ampiasao ny tangram-tarehy efatra mba hanaovana triatra.
10. Ampiasao sombin-tsangambato dimy mba hanaovana triatra.
11. Mampiasà ampahany enina enina mba hanaovana triatra.
12. Raiso ireo tanjam-pako dimy kely ary ataovy tsanganana. 13. Ampiasao ireo taratasy misy ny tangrama, hamarino ny fomba maro azonao atao:
(Ataovy lisitra ireo fomba rehetra azo atao mba hanaovana izany etsy ambony.)
14. Miaraha miasa amin'ny mpiara-miasa iray mba hahitana ny teny matematika marobe na teny mifandraika amin'ny tanjrama araka izay azonao atao.
15. Manaova fehiloha miaraka amin'ny triatra telo kely, ataovy ny rhombus miaraka amin'ireo sombin-kery dimy ary ataovy laharana fito ny rôbô.
Ny Tangram dia piozila malaza fahiny Shinoa izay matetika hita amin'ny kilasy matematika. Ny tanjera dia mora atao. Manana endrika fito izy. Ny tangrama dia manana roapolo lehibe roa, triana midina, triangula kely kely, parallograma iray sy kianja iray. Ary, mazava ho azy fa iray amin'ireo piozila ny mametraka ireo tapany fito mba hamorona ilay kianja lehibe.
Tangrams dia iray amin'ireo fanodikodinam-panafody ampiasaina hanamboarana ny matematika ary hanatsara ny hevitra. Rehefa ampiasaina ny matematika matematika dia matetika no mazava kokoa ny hevitra.
Ireo tetik'ady tahaka izany dia manampy amin'ny famolavolana olana sy ny fisainana manakiana, ary amin'ny fotoana iray ihany koa ny fanomezana motivation ny asa. Ny mpianatra matetika dia te-hanana tanana amin'ny matematika mifanohitra amin'ny asa pensilihazo. Ny fahitana ny fotoana dia zava-dehibe ho an'ny mpianatra mba hifandray, ny fahaiza-manao iray hafa amin'ny matematika.
Ireo tangrams koa dia manamboatra plastika miloko marevaka, na izany aza, amin'ny alalan'ny fakàna sary sy manonta izany amin'ny karatra, ny mpianatra dia afaka mandavaka ireo loko izay loko tiany. Raha lany ny dika printy dia ho ela kokoa ny tangrama.
Ny tangrama dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana takaitra, mamaritra ny karazana angoasy, mamaritra ny karazam-baton'ny triangatra sy ny faritra ary ny perimeter amin'ny endrika / polygônes. Asaivo mizara ny singa tsirairay ny mpianatra ary miresaka betsaka momba ilay ampahany araka izay azony atao. Ohatra, manao ahoana ny endriny? firy ny andaniny? firy firy? inona ny faritra? inona ny vakimparitra? inona ireo fepetra angaha? Moa ve ny sigra? moa ve izy io?
Azonao atao ihany koa ny mikaroka ao anaty aterineto mba hahitana piozila samihafa tahaka ny biby. Ny rehetra dia azo atao miaraka amin'ireo tangam-pandriana fito. Indraindray ireo ampahany amin'ny tadram-pandehanana dia antsoina hoe 'tans'. Avelao ny mpianatra hiatrika fanamby amin'ny tsirairay, ohatra hoe 'ampiasao A, C ary D mba hanao ...'.
Perimeter, faritra ary ny Volan'ny Common sy ny Common
Karazana triangles: Acute and Obtuse
Fantaro ireo mpandrindra
Fampiasana ny teny pythagorean miaraka amin'ireto asa soratra ireto
Free Course Online Geometry
Inona no atao hoe geometry?
Ampio ny ankizy hifampizara ny faritra sy ny manodidina ny faribolana
Trigonometry Worksheet momba ny asa fanovàna
Lalàn'ny Cosines Worksheets and Printables
Sarimihetsika klasikia mampihetsi-po an'i Martin Scorsese
Statistiques de l'admissions Université de Yale
Manova ny takelaka Excel ho an'ny Daty Access 2007
Ny Citadel GPA, SAT ary ACT Data
Ampiasao ny Google Earth mba hijery ny Cosmos Beyond our Planet
Valin'ny ACT ho an'ny Ivy League Admissions
Ny tantaran'ny "marina" an'i Rudolph ilay renin-dandy mena
Ny Sekoly tsy miankina amin'ny fitantanana tsy miankina
Ny vonomoka tao Columbine
Cartoons momba ny tontolo iainana
Ny bibikely malemy fanahy, mandidy ny neuroptera
Ny tatitra momba ny fitsidihan'i Mary Mary
Ny fanapaha-keviny rehefa misy iray amin'ny baolina kitra Golf mifamihina amin'ny hafa
Famaritana ny atao hoe potika samy hafa
Inona no atao hoe CAD? Inona no BIM?
Fanampiana mahasoa ho an'ny "The Necklace"
Ny saran'ny inflation
Fampiharana fampiharana manokana Fitaovana 1 (Pre-2013)
Ny fivoaran'ny habakabaka